အောင်လကိုအနိုင်ယူဖို့နည်းလမ်းတွေ့ပြီလို့ဆိုလာတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗီရာ – ရှအေလငျး
MMA ဝိတ်တန်း ၂ ခုချန်ပီယံ မြန်မာစပါးအုံးလို့ ခေါ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်နဲ့ စိန်ခေါ်သူဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဖိလစ်ပိုင် ဖိုက်တာကြီး ဗီရာ တို့ဟာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် ဗီရာဟာ ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ အောင်လကို အနိုင်ယူနိုင်မယ့် အကွက်အချို့ကိုလည်း သူ့အနေနဲ့ ရှာတွေ့ထားပြီလို့ ဆိုပါတယ်….
ဒီပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အောင်လနဲ့ ဗီရာဟာ ဆရာတူ ၊ လေ့ကျင့်ဖော် လေ့ကျင့်ဖက်တွေ တူညီနေကြသူတွေ ဖြစ်ပြီး အောင်လသာ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဆုကို သိမ်းပိုက် မထားဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ စိန်ခေါ်ထိုးသတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ ဗီရာက ခုလို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…
“ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အောင်လက လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဖြစ်နေလို့သာ ဒီပွဲက ဖြစ်လာရတာပါ.. ကျွန်တော် သူ့လို ဖိုက်တာမျိုးနဲ့ လုံးဝကို ရင်မဆိုင်ချင်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် သူက လက်ရှိ ချန်ပီယံ ဖြစ်နေတော့ ရှောင်လွှဲလို့ မရတော့ဘူးလေ…. ဒီပွဲဟာ အချစ်နဲ့ အမုန်းတွေရောပြီး ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်…
အောင်လ အန်ဆန်ဟာ နောက်ဆုံး ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ၅ ပွဲ စလုံး ပြတ်ပြတ်သားသား ရလာဒ်တွေ နဲ့ အနိုင်ယူထားခဲ့တာကြောင့် ဗီရာက အောင်လကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ အမှားလေး တစ်ချက်တောင် လုပ်လို့မရဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်… ဒါ့အပြင် အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ခုလို ပြောပြသွားပါတယ်…
“အောင်လအန်ဆန်က အားကစားသမား ပီသတဲ့သူပါ…တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နတ်ဆိုး တစ်ပါး ဖြစ်သလို ကြောက်ဖို့လဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်… ကြိုးဝိုင်းထဲ ၀င်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ နောက်ဆုတ်ပြီး ထိုးတတ်တဲ့ အကျင့်က သူ့မှာ ပါမလာတော့ပါဘူး…. တစ်ပွဲပီး တစ်ပွဲ အရည်အသွေးတွေက ပိုတက်လာသလို တိုက်ခိုက်ပုံတွေကလဲ ပိုကြောက်ဖို့ ကောင်းလာပါတယ်…. ဒီထက် ပိုပြီး ပြောရရင် သူ့ရဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်ပါ… မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးကလဲ အခုလို ဖိုက်တာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ၀ိုင်းဝန်းအားပေးနေကြတာလေ… အဲဒီလိုတွေ ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် အကြောင်းတွေးမိလိုက်တိုင်း ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ဖြစ်ရပါတယ်… လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ပင်ပန်းလာလို့ သူ့အကြောင်း စဉ်းစားမိလိုက်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ တွန်းအားတွေ ပေါ်ထွက်လာပါပြီ…..” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗီရာက အောင်လအန်ဆန်ဟာ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ရှာရတာခက်ခဲကြောင်း….အောင်လရဲ့ ပျော့ကွက်ကို ရှာနေဆဲဖြစ်ပြီး အနိုင်တိုက်နိုင်မယ့် ဗျူဟာတချို့ကိုလည်း တွေ့ရှိထားကြောင်း ပြောပြသွားပါသေးတယ်…
ပြီးတော့ ဒီပွဲကို ၅ ချီထိ အရောက်ခံမှာ မဟုတ်ဘဲ ပြတ်သားတဲ့ ရလဒ်ထွက်လာအောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်… အောင်လလို လူမျိုးနဲ့ ထိုးသတ်ပြီး ဝိတ်တန်း ၂ ခုချန်ပီယံ ရယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်း သူ့ရဲ့ ဖိုက်တာဘ၀ ၁၅ နှစ် လောက် စောင့်နေခဲ့တာပါလို့ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်..
ကဲ ပရိသတ်ကြီး မြန်မာလူမျိုး အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ဗီရာတို့ ထိုးသတ်ဖို့က ၁ လပဲလိုပါတော့တယ်နော်…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အောင်လအန်ဆန်ကို ဆက်လက်အားပေးကြပါအုံးလို့…..
Source : Cele Channel
MMA ဝိတျတနျး ၂ ခုခနျြပီယံ မွနျမာစပါးအုံးလို့ ချေါတဲ့ အောငျလအနျဆနျနဲ့ စိနျချေါသူဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံ ဖိလဈပိုငျ ဖိုကျတာကွီး ဗီရာ တို့ဟာ အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ထိုးသတျသှားတော့မှာ ဖွဈပါတယျ…
အောငျလအနျဆနျနဲ့ ယှဉျပွိုငျဖို့အတှကျ ဗီရာဟာ ပွငျဆငျမှုတှေ ပွုလုပျနတောဖွဈပွီးတော့ အောငျလကို အနိုငျယူနိုငျမယျ့ အကှကျအခြို့ကိုလညျး သူ့အနနေဲ့ ရှာတှထေ့ားပွီလို့ ဆိုပါတယျ….
ဒီပှဲရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ အောငျလနဲ့ ဗီရာဟာ ဆရာတူ ၊ လကေ့ငျြ့ဖျော လကေ့ငျြ့ဖကျတှေ တူညီနကွေသူတှေ ဖွဈပွီး အောငျလသာ လိုကျဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံဆုကို သိမျးပိုကျ မထားဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ စိနျချေါထိုးသတျမှာ မဟုတျဘူးလို့လဲ ဗီရာက ခုလို ပွောသှားခဲ့ပါတယျ…
“ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ဖိုကျတာ တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ အောငျလက လိုကျဟဲဗီးဝိတျခနျြပီယံ ဖွဈနလေို့သာ ဒီပှဲက ဖွဈလာရတာပါ.. ကြှနျတျော သူ့လို ဖိုကျတာမြိုးနဲ့ လုံးဝကို ရငျမဆိုငျခငျြပါဘူး..ဒါပမေယျ့ သူက လကျရှိ ခနျြပီယံ ဖွဈနတေော့ ရှောငျလှဲလို့ မရတော့ဘူးလေ…. ဒီပှဲဟာ အခဈြနဲ့ အမုနျးတှရေောပွီး ယှဉျပွိုငျသှားရမှာ ဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောဆိုသှားခဲ့ ပါတယျ…
အောငျလ အနျဆနျဟာ နောကျဆုံး ထိုးသတျခဲ့တဲ့ ၅ ပှဲ စလုံး ပွတျပွတျသားသား ရလာဒျတှေ နဲ့ အနိုငျယူထားခဲ့တာကွောငျ့ ဗီရာက အောငျလကို ရငျဆိုငျရာမှာ အမှားလေး တဈခကျြတောငျ လုပျလို့မရဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ အောငျလအနျဆနျနဲ့ ပတျသကျပွီး သူ့ရဲ့ အမွငျကို ခုလို ပွောပွသှားပါတယျ…
“အောငျလအနျဆနျက အားကစားသမား ပီသတဲ့သူပါ…တဈခြိနျတညျးမှာပဲ နတျဆိုး တဈပါး ဖွဈသလို ကွောကျဖို့လဲ အရမျးကောငျးပါတယျ… ကွိုးဝိုငျးထဲ ဝငျလာပွီ ဆိုတာနဲ့ နောကျဆုတျပွီး ထိုးတတျတဲ့ အကငျြ့က သူ့မှာ ပါမလာတော့ပါဘူး…. တဈပှဲပီး တဈပှဲ အရညျအသှေးတှကေ ပိုတကျလာသလို တိုကျခိုကျပုံတှကေလဲ ပိုကွောကျဖို့ ကောငျးလာပါတယျ…. ဒီထကျ ပိုပွီး ပွောရရငျ သူ့ရဲ့ သံမဏိစိတျဓာတျပါ… မွနျမာ တဈပွညျလုံးကလဲ အခုလို ဖိုကျတာကောငျးတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ ဝိုငျးဝနျးအားပေးနကွေတာလေ… အဲဒီလိုတှေ ကိုယျ့ရဲ့ပွိုငျဘကျ အကွောငျးတှေးမိလိုကျတိုငျး ကြှနျတျောလညျး စိတျဓာတျခှနျအားတှေ ဖွဈရပါတယျ… လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ ပငျပနျးလာလို့ သူ့အကွောငျး စဉျးစားမိလိုကျရငျ ပိုကောငျးတဲ့ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ တှနျးအားတှေ ပျေါထှကျလာပါပွီ…..” လို့ ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဗီရာက အောငျလအနျဆနျဟာ အပွဈပွောစရာမရှိတဲ့ ဖိုကျတာတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ အားနညျးခကျြကို ရှာရတာခကျခဲကွောငျး….အောငျလရဲ့ ပြော့ကှကျကို ရှာနဆေဲဖွဈပွီး အနိုငျတိုကျနိုငျမယျ့ ဗြူဟာတခြို့ကိုလညျး တှရှေိ့ထားကွောငျး ပွောပွသှားပါသေးတယျ…
ပွီးတော့ ဒီပှဲကို ၅ ခြီထိ အရောကျခံမှာ မဟုတျဘဲ ပွတျသားတဲ့ ရလဒျထှကျလာအောငျ ကွိုးစားသှားမယျလို့လညျး သူကဆိုပါတယျ… အောငျလလို လူမြိုးနဲ့ ထိုးသတျပွီး ဝိတျတနျး ၂ ခုခနျြပီယံ ရယူနိုငျဖို့အတှကျလညျး သူ့ရဲ့ ဖိုကျတာဘ၀ ၁၅ နှဈ လောကျ စောငျ့နခေဲ့တာပါလို့ သူက ဆိုခဲ့ပါတယျ..
ကဲ ပရိသတျကွီး မွနျမာလူမြိုး အောငျလအနျဆနျနဲ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား ဗီရာတို့ ထိုးသတျဖို့က ၁ လပဲလိုပါတော့တယျနျော…ပရိသတျကွီးတို့လညျး အောငျလအနျဆနျကို ဆကျလကျအားပေးကွပါအုံးလို့…..
အရေးပေါ် အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတက်လိုက်ရတဲ့ လူရွှင်တော်ဝက်မ
ဆံပင်ကြည့်ပြီး အပျို အအို ခွဲနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်က ထူးခြားတဲ့ ရွာတစ်ရွာ
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ ကြေကွဲဆို့နင့်ဖွယ်ရာ...
ဆေးဖိုးဝါးခအလှူရှင် လိုအပ်နေကြောင်းဝမ်းနည်းစွာ ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ ဟာလူရွှင်တော်...
မိဘတွေ သတိထားကြပါ 😨 ၁၀ တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး စာအကျက်လွန်ရာမှ စိတ် ရောဂါ...
မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာ မနန္ဒာကို ဆွဲထည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အလှမယ်...